Ungaxhuma kanjani idivayisi yeselula ku-TV
Inicio » smart TV » Ungaxhuma kanjani idivayisi yeselula ku-TV
9 Ukubukwa 0
Ukuxhuma umakhalekhukhwini ku-TV akunzima njengoba kubonakala: namuhla sinenani elihle lezindlela ezisivumela ukuthi sabelane ngamavidiyo, izithombe noma isikrini sonke sedivayisi yakho yeselula kumabonakude wakho, kungakhathaliseki ukuthi I-iPhone noma i-Android.
Ukwazi-ke ukuthi kulula kangakanani ukuxhuma iselula ku-TV, sizobona zonke izindlela zokuxhuma umakhalekhukhwini ku-TV, noma ngekhebula, nge-Wi-Fi, ngokuqondile noma ngezesekeli.
Uyixhuma kanjani i-iPhone noma i-iPad ku-TV nge-Apple TV
Azikho izinketho eziningi: empeleni, ukuphela kwendlela yokulingisa isikrini se-iPhone noma i-iPad (noma i-macOS) kumabonakude nge-Apple TV, njengoba imikhiqizo yale nkampani idinga umthetho olandelwayo we-AirPlay ukwenza kanjalo. phakathi kwe-iGadget nomabonakude.
Okokuqala udinga ukukhomba isithonjana se-Screen Mirroring noma usebenzise inketho ye-AirPlay ukuze ubuke isibuko ku-iOS Control Center futhi uqaphele ukuthi iyiphi i-Apple TV okuqukethwe okudingeka kusakazwe kuyo futhi kuqinisekiswe kuyo.
Nokho, kuyenzeka futhi ukuxhuma amadivaysi eselula e-iOS ku-TV usebenzisa le ndlela elandelayo, okungenani ngokudlala amavidiyo nezithombe esikrinini esikhulu.
Xhuma iselula ku-TV nge-Google Cast (Chromecast)
Abanikazi bedivayisi ye-Android banezinketho eziningi zokuxhuma amadivayisi abo ku-TV kunabasebenzisi be-iPhone. Enye yazo, edume kakhulu, ukusebenzisa iphrothokholi yobunikazi ye-Google Cast, okuthi, naphezu kokuphathelene njenge-AirPlay, itholakala kokubili ku-Chromecast nasemabhokisini aphezulu avela kubakhiqizi abahlukahlukene.
Nge-Chromecast noma i-set-top box ehambisanayo efakiwe futhi yalungiswa, idivayisi ye-Android exhunywe kunethiwekhi efanayo ye-Wi-Fi izoboniswa kuzinhlelo zokusebenza ezihambisanayo (i-Netflix, i-Spotify, i-YouTube, njll.) isithonjana sokusakaza nge-Google Cast; Ukuze usakaze amavidiyo, izingoma, nezithombe ezigciniwe, sebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Google Photos (Android, iOS), khetha okuqukethwe, bese ukhetha inketho yokusakaza-bukhoma.
Nokho, inketho ye-Screen Mirroring etholakala kuhlelo lokusebenza lwe-Google Home (i-Android, iOS) ayihambisani ne-iPhone noma i-iPad, futhi iyisici se-Google kuphela.
Ungaxhuma kanjani iselula ku-TV usebenzisa i-Miracast
Uma ungenayo idivayisi ye-Google Cast ehambisanayo, kuyenzeka usakaze okuqukethwe kusuka kudivayisi yakho ye-Android kuya kumabonakude nge-Miracast Protocol, etholakala cishe kuwo wonke amathelevishini atholakala emakethe, kodwa angasetshenziswa kakhulu.
Ithuthukiswe i-Wi-Fi Alliance, i-Miracast iyindinganiso yokudlulisa umsindo wekhwalithi Yomsindo Ozungezile ongu-5.1, ividiyo efika ku-1080p, kanye nezithombe ngaphandle kwesidingo sekhebula noma uxhumano lwe-Wi-Fi.
Ukwenza lokhu, isebenzisa ukuxhumana kwephoyinti nephoyinti phakathi kwe-TV kanye ne-smartphone/ithebhulethi, ngakho zombili izisetshenziswa kufanele zisebenzisane.
Uma konke sekumi ngomumo, vele usebenzise uhlelo lokusebenza oluhambisanayo futhi usakaze ngokuqondile usuka ku-smartphone uye ku-TV, ngaphandle kokuphazamiseka noma ukuncika ku-Wi-Fi noma i-Bluetooth.
Ama-TV asekela ubuchwepheshe angakunika amagama ahlukene: I-Samsung, isibonelo, isebenzisa igama elithi Screen Mirroring; U-Sony uyibiza ngokuthi i-Miracast Screen Mirroring; Abakwa-LG noPhilips bamane bayibize nge-Miracast.
Amanye amadivaysi ahambisanayo yilawa alandelayo:
Amadivayisi asebenzisa i-Windows 8.1 ne-Windows 10
Amadivayisi asebenzisa i-Windows Phone 8.1 kanye ne-Windows 10 Mobile
Amadivayisi e-Android aqala nge-4.2 Jelly Bean, ngaphandle kwalokho (isibonelo, i-Motorola ikhubaze isici ekukhishweni kwayo kwakamuva)
Amadivayisi asebenzisa i-fireOS, njenge-Amazon Fire TV Stick
Amanye amadivaysi okusakaza afana ne-Chromecast, njenge-Microsoft Wireless Adapter kanye ne-Anycast alternative
Uyixhuma kanjani iselula ku-TV usebenzisa intambo ye-HDMI
Kuyenzeka futhi ukuxhuma iselula ku-TV usebenzisa izintambo, futhi kunezinhlobo ezimbili ezihambisanayo, i-MHL ne-SlimPort. Eyokuqala isebenzisa iphethini ye-VESA, ngakho ihambisana nenani elikhulu lokuxhuma: ngaphezu kwe-HDMI, isekela i-DisplayPort, i-DVI kanye ne-VGA; ama-adaptha esibili asebenza kuphela namachweba we-HDMI futhi ezimweni eziningi adinga ukunikezwa kwamandla kwangaphandle.
Izinzuzo zokuxhuma ngezintambo ukuthi zisekela izinqumo kusuka ku-4K kuya ku-8K, kanye nomsindo we-Surround Sound, ne-True HD ne-DTS-HD. Kokubili okukodwa nokunye kuyahambisana nenani elikhulu lama-TV, amaphilisi nama-smartphone.
Intambo ye-MHL, enoxhumo lwe-HDMI ye-TV, i-microUSB ye-smartphone (uma idivayisi yakho inembobo ye-USB-C, i-adaptha iyadingeka) ingatholakala kunethiwekhi yezitolo eziku-inthanethi ngamanani athengekayo.
Ikhebula le-SlimPort liyivelakancane, ngoba ayifunwa kakhulu ngabathengi futhi ingabiza inani elithe ukuba phezulu.
Uyixhuma kanjani iselula ku-TV usebenzisa intambo ye-USB
Ekugcineni, njengoba i-smartphone ye-Android iseyidivayisi yokugcina yangaphandle, kungenzeka ukuxhuma iselula ku-TV ngekhebula le-USB, futhi ubonise izithombe zakho ngqo esikrinini esikhulu.
Vele ukhumbule lokhu okulandelayo: le ndlela ayisebenzi ngamafayela, ngakho-ke akunakwenzeka ukudlala amavidiyo agcinwe kudivayisi yeselula. Nakuba kulinganiselwe kakhulu, kuyindlela engokoqobo kakhulu yokubonisa abangani bakho izithombe zakho zakamuva.
Amehlo Angase Abonise Izimpawu Ze-Autism kanye ne-ADHD: Ukufunda
Amacala amasha ama-2 egciwane elibulalayo aphinde avele eSpain ngemuva kweminyaka engama-20
Ukulungiswa kwe-4K: yazi izinzuzo futhi uma kufanelekile